U-Ayanda Msweli nezinhlelo zokukhuthaza inhlanzeko nokuhleleka kwamarenke | News24
U-Ayanda Msweli nezinhlelo zokukhuthaza inhlanzeko nokuhleleka kwamarenke
eThekwini - Intandokazi yomsakazo eyethula isimo sezemigwaqo u-Ayanda Msweli uhlele ukuvuselela isithunzi nokubuyisana embonini yamatekisi.
UMsweli obe nohambo lokuvakashela amarenke amahlanu eGoli ngenyanga ka-Mfumfu uthi kuningi akubonile okumvule amehlo kanti kudala enesifiso sokwenza ushintsho kule mboni.
Lo msakazi othandwa kakhulu ngamatemu awasebenzisayo emsakawazi uma eqwashisa abantu ngezingozi kanye nesimo somgwaqo futhi anikeze nabalalleli isifundo sokuthi benzenjani ukuze baphephe emgwaqeni uthi akafuni ukugcina ngokukhuluma emsakazweni kuphela kodwa kumele kusetshenzwe.
UMsweli onenkampani iNkundla Communications uthi usekuqalile ukuhlanganyela nabaphathi bososeshini abahlukene lapho ekhetha khona abashayeli okuyibona azosebenzisana nabo ukubafundisa ngezinto okumele baziqaphele ukuve kunyuswe izinga lokusebenza.
“Kuzoba noshintsho olukhulu oluzokwenzaka ngonyaka ozayo futhi ngiyafisa ukuthi uhulumeni, yimboni yamatekisi kanye nezakhamuzi, zibambisane nami kulokhu. Ngihambela amarenki ahlukahlukene ngenhloso yokukhetha abantu engizosebenzisana nabo ukuze kulungiswe isimo. Indaba yokungcona kwamarenki, amathoyilethi angconile, abashayeli abangakwazi ukuziphatha kanye nabangahlelekile, womashali abadelelayo nabangabahloniphi abagibeli izophela nya.
UMsweli uthi ibhizinisi lamatekisi yilona bhizinisi elilawulwa ngabantu abansundu ngakhoke ukuthuthuka kwalo wukuthuthuka kwendlu emnyama.
“Ngithole ukwesekwa okukhulu ngesikhathi ngihambele eGoli kodwa ngeke ngigcine lapho njengoba ngisazohambela amarenki ahlukahlukene nalapha eThekwini.
Ngempelasonto ezayo, ngimeme bonke ababambisene nami kulo msebenzi emcimbini wokuvala unyaka nokuyilapho engizokwethula khona izinhlelo zami zangonyaka ozayo ngethemba lokuthi baningi abazongeseka futhi bangixhase kulokhu.
Le Ngwenya ithi konke ekwenzayo ikwenza ngamandla ayo, kodwa iyalwamukela uxhaso oluvela kwabanye abanezifiso ezifana nezakhe.
UMsweli uthi ngeke agcine ngokuqwashisa abamatekisi kuphela ukuba bashintshe ukwenza kwabo, kodwa uzokuba nemihlangano ekhethekile emadoobheni ahlukahlukene nokuyilapho azofindisa khona abantu ngamalungelo abo.
“Kuyamangalisa ukuthi baningi abantu abangawa amalungelo abo emgwaqeni, umuntu akayazi imigudu okumele ayilandele lapho elinyalelwa amasondo ngenxa yemigodi emgwaqeni, nokuthi benzenjani uma labafowethu abasika utshani belimaza amawindi ezimoto.”
Okunye okuhlula abantu nokuyinkinga kakhulu wukungazi amalungelo abo lapho bevinjwa khona ngamaphoyisa omgwaqo.